1. Software sida Nero
2. Nero u Mac
3. lagu bedelan karo Black
> Resource > Mac > Nero u Mac? Download Alternative ee Best in Nero u Mac
Nero, halkan gaaban Nero Gubidda ROM, waa DVD gubanaya software ugu caansan suuqa. Tan iyo markii ugu horeysay ee la sii daayay sanadkii 1997, waxaana haatan ku Version 11. Nero waddaa on Microsoft Windows iyo Linux, laakiin nasiib darro ma jirto version Mac. Sidaas darteed ma jiraa barnaamij shaqeeya sida Nero u Mac?
Haa, dhab ahaantii, in badan oo software DVD gubashada waxaa laga heli karaa. Halkan waxaan si adag ugu talinaynaa Wondershare DVD Creator for Mac (libaax buurta taageeray) - Nero u Mac kale oo weyn oo xoog badan feature abuurka DVD, user-friendly interface iyo DVD gubashadii tayo sare leh. Waxay kaa caawinaysaa inaad ka samaysaa filimada DVD ka videos iyo sawiro inuu u ciyaaro ciyaaryahanka DVD iyo Mac computer (libaax buurta, libaax ka mid ah). Ka sokow videos gubanaya si DVD, waxa ay sidoo kale ka dhigaya video iyo sawiro fiirin leh ugu fiican oo tayo leh oo ay sixiddiisa qalabka sida Raadka video, goo, Dalag, isku beddesha, Watermarks, iwm Waxaad si fudud u samayn kartaa filim ku kalifay la qoraalka, music soo jeeda, oo kala guurka siman inuu xidho DVD leh tayo sare leh. Download Free version maxkamad ay halkan:
Talaabooyinka fududahay in la isticmaalo Nero-sida DVD Creator for Mac
Wondershare DVD Creator for Mac (libaax buurta taageeray) ogolaanayaa qof gubi DVD filimada leh waayo-aragnimo ka hor. Waxaa la iman interface ah mid kooban oo user-friendly, taas oo ka dhigaysa in ay suurtagal tahay in ay gubaan video inay DVD ku qasabno. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fududahay in la isticmaalo Nero arrintaasna kale Mac.
1 Import video iyo / ama sawir files
Ku rakib Nero duwan oo loogu talagalay Mac. Markii barnaamijka laga furay, shaashad soo dhaweyn tusi doonaa. Waxaad dooran kartaa in la abuuro mashruuc cusub ama la furo mashruuc jira.
Next, aad dajiyaan karaa files warbaahinta in DVD Creator in 2 siyaabood: si toos ah jiidi videos ama sawiro barnaamijka ama guji "+" badhanka si ay u dajiyaan. Ogsoonow in aad koox yar videos wada si ay u sameeyaan kartaa cutubka ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, jiidi clip ka soo Murayaad ilaa muuqataa line buluug ah.
2 Edit faylasha video (Ikhtiyaar)
Qaar badan oo qalab video tafatirka caawin kor video files, oo ay ku jiraan Dalag, isku beddesha, goo, watermark, Raadka, iwm In sidaa la yeelo, si fudud u muujiyo video ah oo guji "Edit" button in la furo suuqa kala tafatir ah. Dhammaan isbeddelada isla markiiba waa la isticmaali doonaa si aad u qaadan kartaa a-time dhab ah Kulanka Xiisaha Leh.
3 Samee caadadii DVD menu u DVD aad (Ikhtiyaar)
In ka badan 90 arrimo DVD menu kartoon ah oo ma guurto ah waxaa loo dhisay in Nero, waayo, Mac. Oo iyaga waxaa la aad si fudud u abuuri kartaa DVD menu qurux badan. Just iska beddelaan tab Media inay tab Menu hoose, iyo dooran template ah menu jecel. Next, waxaa shakhsiyeeyo la jecel aad background image, music soo jeeda, booska item, iwm Haddii aadan u baahan menu ah, dooro "Menu No".
4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo bilaabaan in ay gubi
Hubi DVD filimada aad eegto weyn adigoo gujinaya "Kulanka Xiisaha Leh" badhanka si aad ku eegaan aad DVD movie-waqtiga dhabta ah. Ugu dambeyntii, geliso DVD disc maran in aad DVD gubi oo guji "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya DVD disc la Nero this barnaamijka kale Mac.
Talooyin: Haddii cabbirka aad DVD movie waa ka badan 4.7G, laakiin aadan haysan disc DVD9 ah (7.9g) iyo geliso halkii disc DVD5 ah, barnaamijka si toos ah resize doonaa filim ku haboon disc DVD5 this (4.7G ).